गेल हंगामा नेपाल आएर खेल्ने विदेशी खेलाडी - खेलकुद - साप्ताहिक
अहिलेको विश्व फुटबलका सबैभन्दा ठूलो दुई स्टार हुन्— अर्जेन्टिनी लियोनल मेसी र पोर्चुगाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो । उनीहरूमध्ये कसैले नेपाली घरेलु फुटबल खेल्यो भने कस्तो होला ? मेसी र रोनाल्डो जत्तिकै चर्चित अन्य केही खेलाडी इजिप्टका मोहम्मद सलाहदेखि ब्राजिलका नेयमारले नेपालमा खेल्ने कुनै सम्भावना छ त ? यसको स्पष्ट उत्तर हो— छैन ।
नेपाली फुटबलले यस्तो हुन्छ भनेर त सोच्न पनि सक्दैन । फुटबल र क्रिकेटको तुलना हुन्न । यी दुई फरक खेल हुन् । यी दुई खेलको समानता के भने फुटबल र क्रिकेट नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हुन् । केही समय अगाडिसम्म पनि कसैले वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले नेपाली घरेलु क्रिकेटमा खेल्नेछन् भन्दा त्यसलाई पनि विश्वास गर्न सकिन्नथ्यो । भनिन्थ्यो होला, जसरी मेसी र रोनाल्डोले नेपाली घरेलु फुटबलमा खेल्ने सम्भावना छैन, त्यसरी नै गेल पनि नेपालमा आउनेछैनन्, क्रिकेट खेल्न ।
तर नेपाली क्रिकेटले अविश्वसनीय रूपमा यति बेला कोल्टे फेरेको छ । गेलले एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा पोखरा राइनोजका लागि खेल्ने भएका छन् । आधुनिक विश्व क्रिकेटका सबैभन्दा ठूला नाम हुन्, क्रिस गेल । अचेलको क्रिकेट ट्वान्टी–२० क्रिकेटको हो, अझ भन्दा फ्रेन्चाइज ट्वान्टी–२० क्रिकेटको । यी गेल यही ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा राज गरिरहेका छन् । उनले नेपालमा खेल्नु मेसी अथवा रोनाल्डोले नेपालमा फुटबल खेल्नुजत्तिकै हो ।
यही वर्षको मार्च १४ मा एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को चौथो संस्करण सुरु हुनेछ र गेल उद्घाटन खेलमा पोखराका लागि मैदानमा उत्रनेछन् । त्यति बेला नेपाली क्रिकेटमा एउटा उपलब्धि थपिनेछ । नेपाली क्रिकेटले नयाँ कोसेढुंगासहित परिचय पाउनेछ । विश्वमै पनि अब नेपालको क्रिकेटबारे चर्चा हुनेछ । एकपल्ट गेलले नेपाली क्रिकेटलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएपछि उनी जत्तिकै राम्रा अन्य खेलाडीका लागि ढोका खुल्नेछ ।
जुन दिन गेलले पोखराबाट खेल्ने भए भनेर सोल्टी होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा भयो, त्यसको भोलिपल्ट नेपाली सञ्चारमाध्यममा ठूलो कभरेज भयो । विदेशी समाचार संस्थाले समाचार लेखे, विशेषत: फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले । क्रिकेट लोकप्रिय रहेका देशका अधिकांश मिडियाले यो समाचारलाई कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिए ।
त्यसो त, नेपालकै लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिगमा खेलेर तहल्का मच्चाएका थिए । त्यसयता उनले ठूला फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग खेले । पारस खड्काले पनि यस्तै फ्रेन्चाइज क्रिकेट अबुधाबीमा खेले । तर यति बेला गेलजस्ता खेलाडी नेपालमै आएर खेल्ने प्रसंगले हंगामा मच्चाएको छ ।
केही दिनअगाडि मात्र हो, ईपीएलका आयोजकले एउटा नयाँ नियम ल्याएको । यसलाई लिएर धेरै खाले विवाद निस्के । नयाँ नियम थियो, यसपल्टको प्रतियोगितामा कुनै पनि विदेशी खेलाडीले खेल्न पाउनेछैन । जसले यसअघि भएका धनगढी प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिग खेलेका थिए । धेरैको आरोप थियो, यो ईपीएलले आफूजस्तै अरू दुई प्रतियोगितालाई कम स्तरको हो भनेर देखाउन खोजेको हो । तर, यसले गेलजस्ता खेलाडी आउने ढोका खोलिदियो ।
पोखरा टिमका मालिक हुन्, दीपा अग्रवाल । उनी पनि मान्छिन्– जे भयो, त्यो अहिलेसम्म पनि विश्वास गर्न गाह्रो छ । उनी भन्छिन्, ‘ट्वान्टी–२० क्रिकेटको पर्याय रहेका गेलले हाम्रो टिमबाट खेल्ने भएका छन् । यसले जति चर्चा पाउनेछ, त्यो हाम्रै टिममा मात्र सीमित हुनेछैन । यसले नेपाली क्रिकेट र समग्रमा देशकै लागि फाइदा हुनेछ । उनी जत्तिको लेजेन्डरी खेलाडीसँग खेल्न पाउँदा सबैले धेरै सिक्न सक्छन् ।’
ईपीएलका कार्यकारी निर्देशक आमिर अख्तर पनि उत्तिकै मक्ख छन् । एक प्रकारले पूरा घटनाक्रममा उनको सबैभन्दा निर्णायक भूमिका छ । उनकै भाषामा गेललाई नेपालमा खेल्न तयार पार्न पनि एक महिनाभन्दा बढीको समय चाहिएको थियो । गेल जत्तिको खेलाडीको कुरा क्रिकेटमै मात्र सीमित राखेर हेरिनु हुन्न । यो त क्रिकेट भन्दा पनि परको कुरा हो । उनी भन्छन्, ‘गेलको आगमनले सबैभन्दा फाइदा हुने भनेको नेपाली क्रिकेटलाई नै हो ।’
यसपल्टको ईपीएलसँगै नेपालमा आएर खेल्ने अरू खेलाडी को–को हुन् त ? अहिलेसम्म अगाडि आएका सबैभन्दा ठूला नाम हुन्, असिम अमला । उनले कुन टिमबाट खेल्ने हो, त्यो भने टुंगो लागेको छैन । उनको सम्भावना पोखराकै टिमबाट हो । बरु, ड्वायन स्मिथले भैरहवा ग्लाडियटर्सबाट खेल्ने निश्चित भइसकेको छ । यस्तै मोहम्मद सहजादले चितवन टाइगर्स र उपुल थरंगाले ललितपुर प्याट्रियसबाट खेल्दैछन् । काठमाडौं किंग्स इलेभेनमा पुरानै खेलाडी केभिन ओ’ब्राइन छँदैछन् ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने विश्व क्रिकेटलाई टाढैबाट पछ्याइरहेका लागि पनि क्रिस गेल उत्तिकै परिचित नाम हो । उनको आगमनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बोलेको रेकर्डेड क्लिप पनि देखाइएको थियो । त्यसमा उनी आफ्नो स्वभावअनुसार रंगीन र बिन्दास देखिएका थिए । उनलाई विश्व क्रिकेटमा ‘बोस’ नामले पनि चिनिन्छ । उनले आफैंलाई पनि विश्व ट्वान्टी–२० क्रिकेटका बोस भनेका छन् ।
उनले क्लिपमा भनेका छन्, ‘गेलको विस्फोटक ब्याटिङका लागि तयार रहनु । यो वास्तवमै निकै उत्साहजनक हुनेछ । नेपालमा सबैसँग चाँडै भेटांैला ।’ जमैकामा जन्मेका गेलले वेस्ट इन्डिज टिमको नेतृत्व पनि सम्हाले । उनले अहिलेसम्म क्यारेबियन टिमका लागि १ सय ३ टेस्ट खेलेका छन् । यस्तै ३ सय १ वान डे र ५८ ट्वान्टी–२० पनि । वास्तवमै उनी क्रिकेटको कान्छो शैलीमा महारथ प्राप्त खेलाडी हुन् । उनको खेलको विशेषता नै हो, विस्फोटक ब्याटिङ ।
उनको ब्याटले बोल्ने भाषा भनेकै छक्का र चौका हो । उनले धेरै देशका फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा खेलेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो इन्डियन प्रिमियर लिगमा भने उनले कोलकाता नाइट राइडर्स, रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र किंग्स इलेभेन पञ्जाबका लागि खेलिसकेका छन् । उनी उत्तिकै महँगा खेलाडी पनि हुन्, अनि लोकप्रिय पनि । उनी ४० वर्षका भइसके, तर माग उत्तिकै छ । बेंगलोरका लागि उनले बनाएको १ सय ७५ रनको प्रदर्शन कसले पो बिर्सन सक्छ र ?
कोही पनि क्रिकेट खेलाडीले सय टेस्ट खेलेको छ भने उसका लागि अर्को परिचयको आवश्यकता नै छैन । हसिम अमला यस्तै खेलाडी हुन् । उनले दक्षिण अफ्रिकाका लागि १ सय २४ टेस्ट खेलेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले १ सय ८१ वान डे र ४४ ट्वान्टी–२० पनि खेलेका छन्, दक्षिण अफ्रिकाका लागि । उनले टेस्टमा ९ हजार र वान डेमा ८ हजारभन्दा बढी रन बनाएका छन् । यो तथ्यांकले नै देखाउँछ, उनी कत्तिको खेलाडी हुन् भनेर ।
रंगभेदका कारण दक्षिण अफ्रिका लामो समय विश्व खेलकुदबाट टाढा रह्यो । सन् ९० तिर यसले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रवेश गरेको हो । त्यसयता दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटले पाएका सबैभन्दा राम्रा माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानमा उनको नाम पनि आउने गर्छ । त्यसैले त उनले त्यति धेरै अवसरमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाए । दक्षिण अफ्रिकी टिमको नेतृत्व पनि गरेका ३६ वर्षीय अमलाले सन् २०१९ को विश्वकपपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास लिए ।
त्यसयता उनले आफूलाई फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छन् । सन् २०१६ मा इन्डियन प्रिमियर लिगमा किङ्स इलेभेन पञ्जाबबाट खेलेका अमलाले क्यारेबियन प्रिमियर लिगमा ट्रिनिडाड नाइट राइडर्सबाट पनि खेले । यस्तै उनले सन् २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकी माजन्सी सुपर लिगमा डरबन हिट्सको प्रतिनिधित्व गरे । भर्खरै मात्र उनले पाकिस्तानी सुपर लिगमा पेसावर जाल्मीको मेन्टरका रूपमा अनुबन्ध गरेका छन् ।
उनी त्यो जमानाका वेस्ट इन्डिज खेलाडी हुन्, जति बेला त्यहाँको टेस्ट क्रिकेट ओरालो लाग्दै थियो, त्यतिबेला यिनै वेस्ट इन्डिजका खेलाडीले ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा तहल्का मच्चाइरहेका थिए । भलै वेस्ट इन्डिज विश्व क्रिकेटमा पहिलेको जस्तो शक्तिशाली रहेन । तर जति बेला छोटो संस्करणको क्रिकेट आउने गर्छ, त्यति बेला सबैभन्दा पहिले सम्झिने भनेको वेस्ट इन्डिजकै खेलाडी हुन् । यही पुस्ताका खेलाडी हुन्, ड्वायन स्मिथ ।
शारीरिक रूपमा निकै शक्तिशाली देखिने ३६ वर्षीय स्मिथले खालि १० टेस्ट मात्र खेल्न पाए । बरु यसको तुलनामा उनले वान डे बढि खेले, १ सय ५ । यस्तै उनले वेस्ट इन्डिजका लागि ३३ ट्वान्टी–२० मा प्रतिनिधित्व गरे । बारबाडोजका यी खेलाडीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, अलराउन्ड प्रदर्शन । उनको ब्याट जति चल्ने गर्छ, बलिङ पनि उत्तिकै घातक हुने गर्छ । त्यसैले पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा उनको माग बढेको हो ।
स्मिथले इन्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्स, डेकन चाजर्स, चेन्नाइ सुपर किङ्सका लागि खेले । सन् २०१२ मा उनले मुम्बइका लागि चेन्नाईविरुद्धको खेलमा अन्तिम तीन बलमा एक छक्का र तीन चौका प्रहार गरे र खुबै चर्चित बने । त्यति बेला मुम्बईलाई जितका लागि अन्तिम तीन बलमा १४ रन चाहिएको थियो । उनले पाकिस्तानी सुपर लिगमा पनि खेलेका छन्, इस्लामाबाद युनाइटेडका लागि । यस्तै उनले क्यानाडामा पनि खेलिसकेका छन् ।
विश्व क्रिकेटमा अफगानिस्तानको प्रवेश भएको धेरै भएको छैन । लामो समय आन्तरिक कलह र युद्धमा रुमलिएको अफगानिस्तानले गम्भीर रूपमा क्रिकेट खेल्न थालेको हिजैजस्तो लाग्छ । तर, छोटो समयमै अफगान क्रिकेटले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ र उसका केही खेलाडी फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा खुबै चम्किएका छन् । यस्तै एक खेलाडी हुन्, मोहम्मद साहनाज । उनी प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान त हुन नै, त्यसमाथि विकेट किपर पनि ।
शारीरिक रूपमा उनी केही मोटो देखिन्छन् । तर, उनको फुर्तिलो खेलमा कुनै शंका छैन् । त्यो अर्थमा उनी निकै उपयोगी खेलाडी हुन् । उनले अफगानिस्तानका लागि २ टेस्ट, ८४ वान डे र ६५ ट्वान्टी–२० खेलेका छन् । उनले सन् २०१६ मा बंगलादेश प्रिमियर लिगमा रंगपुर राइडर्सका लागि खेले । सन् २०१८ यता भने उनी चिटगाउँ भिकिङ्समा आबद्ध छन् । उनी अफगानिस्तान प्रिमियर लिगमा भने पाकिस्तानका लागि खेल्छन् ।
श्रीलंकाली क्रिकेटले पछिल्लो समय पाएका सबैभन्दा राम्रा खेलाडीमध्ये एक हुन्, उपुल थरंगा । उनी अब्बल दर्जाका खेलाडी थिएनन् भने उनले श्रीलंकाली टिमको नेतृत्व पनि गर्ने थिएनन् । उनले श्रीलंकाका लागि ३१ टेस्ट खेलेका छन् । यस्तै उनको नाममा २ सय ३५ वान डे र २६ ट्वान्टी–२० क्रिकेट पनि रहेको छ । उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, सीमित ओभरको क्रिकेटका लागि उपयुक्त खेलाडी । यसमा उनले आफ्नो परिचय पनि बनाएका छन् ।
थरंगा सात अवसरमा वान डे क्रिकेटको दोहारो शतकीय साझेदारीमा सहभागी भइसकेका छन्, जुन आफैंमा कीर्तिमान हो । उनलाई अहिलेसम्म पनि श्रीलंकाली क्रिकेट टिमकै एक सदस्यका रूपमा लिए पनि हुन्छ । यी बायाँहाते प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आक्रामक सुरुवातका लागि पनि परिचित छन् । उनले सन् २०१८ मा श्रीलंकाको एसएलसी ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा कोलम्बोबाट खेलेका थिए । उनी त्यस टिमको उपकप्तान पनि थिए ।
प्रियंकाको तस्बिर राख्दै बार्सिलोनाले भन्यो, ‘वी लभ नेपाल’